03 / 08 / 2017 | RayHaber | raillynews
Maalinta: Ogast 3, 2017
Basaska Magaalada ee Batman waxay celcelis ahaan dadka 652 kun 830 ku qaadaan bishii
Baskeenna 60, oo ka shaqeeya gudaha Degmadda Batman Degmooyinka Shirkadaha iyo Kaabayaasha, waxay sii wadaysaa adeegyadeeda barta 44 ee xaafadda. Basaska bixiya fududeynta gaadiidka dadweynaha ee magaalada, adeegyo dhexdhexaad ah oo leh awooda qofka ee 581 [More ...]
Kaadhka basaska ee basaska, ka dib markii la tuurayo dadka reer Trabzon
Kaadhka elektiroonigga ah ee Trabzon ATM-yada oo ay bixiso Degmadda Trabzon ee Magaalo Weynta dadka Trabzon ayaa siisa raaxo muhiim u ah muwaadiniinta raacaya basaska Degmooyinka Caasimadda. Trabzonlular, oo la siinayo fursad lagu raaco basaska degmada [More ...]
Qiimaha Kayseri Erciyes wuxuu noqonayaa qiimaha adduunka
Hawlaha iyo bartilmaameedyada Dawlada Hoose ee Magaalada Kayseri ee Erciyes waxaa loo sharxay saxaafadda iyo dadweynaha. Kulanku, maalgashiga maalgelinta ee Dawlada Hoose [More ...]
Park in Istanbul with Istanbulkart
Istanbulkart, oo ay dadka reer Istanbul u isticmaalaan gaadiidleyda dadweynaha maalin walba, ayaa sidoo kale bilaabay in loo isticmaalo İSPARK meelaha baabuurta la dhigto. Mid cusub ayaa lagu soo daray shaqooyinka Dawladda Hoose ee Magaaladda Istanbul iyada oo loo eegayo aragtida Smart City. 20 milyan oo muwaadiniin midkiiba [More ...]
Duulimaadku wuxuu ku dhammaaday IZDENİZ, duulimaadyadu waxay bilaabanayaan 15.00
Dawlada Hoose ee Magaalada Metrozmir polZDENİZ A.Ş. Badmaax oo la Turkey ahayd dhanyahay wadahadalo shuruudaha shaqada ee u dhexeeya ururka. Ka dib markii heshiiska la saxeexay subaxnimadii, shaqo joojinta bilaabatay July waxay ku dhammaatay 12. Laga soo bilaabo 15.00 [More ...]
83 Sannad Sanno Dumar ah oo Lagu Xakumay Tareenka Caadiga ah
6 hooyadeed, 83-sano jir Hanifi Kınacı, oo ku dhacday tareenka xamuulka ah ee degmada Başpınar ee Kırıkkale, ayaa nolosheeda lumisay. Sida xogta lagu helay, dhacdadu waxay ka dhacday safafka 11.00 ee degmada Kırpınar ee Başpınar. Wadada tareenka ee Hanifi Kınacı [More ...]
Maamulaha Guud ee TCDD Apaydin, Daraasad Tababarka Korantada Sare ee Karaman
Maareeyaha Guud ee TCDD İsa ApaydınIyada oo qayb ka ah tareenka xawaaraha sare ee Konya-Karaman-Ulukisla, wuxuu booqday Karaman waxaana la kulmay duqa magaalada Ertugrul Caliskan. Maareeyaha Guud ee TCDD İsa Apaydın, oo ay weheliyaan weftiga Karaman tareenka [More ...]
Tareenka Gaadiidka Mareykanka ee Burburiyay Magaalada Oo Dhaawacmay!
Tareenka Gaadiidka Mareykanka ee Burburiyay Magaalada Oo Dhaawacmay! : Magaalo yar oo Mareykan ah, tareen taayir ah ayaa ka daadgureeyay magaalada. Gawaarida qaar waxay dabka gaysteen walxaha khatarta ah awgeed. [More ...]
Rayder, Tüvasaş Agaasimaha Guud ee Booqashada Kocaarslan
Wuxuu ka mid yahay aasaasayaashii RAYDER welina wuxuu xubin ka yahay guddiga kormeerka. Dr. In lagu hambalyeeyo İlhan Kocaarslan magacaabistiisa Agaasimaha Guud ee TÜVASAŞ iyo inuu gacan ka geysto waaxda Nidaamka Tareenka. [More ...]
Buyukderbent Station ayaa Sugeysa Tareenka Safka ah
Adapazarı Haydarpaşa inta u dhaxaysa Island Express, Xawaaraha Xawaaraha Xawaaraha Sare sabab u ahaa in ka badan 2 sanadood ayaa nastay. Tareenka rakaabku wuxuu bilaabay duulimaadyadiisa mar labaad, laakiin kuma istaagin goob kasta. Ugu weyn [More ...]
Kayseri oo ka fiican Tareenka Xawaaraha Sare
Kayseri waa magaalo weyn oo mudan in la helo maalgashiyada ugu quruxda badan Mashaariicda Tareenka Xawaaraha Sare ee si xawli ah uga socda waddankeenna sannadihii la soo dhaafay, inta u dhaxaysa Antalya Eskişehir iyo Antalya Kayseri Project iyo [More ...]
Waxaa jiri doona laba tareen oo tareemo ah oo ku yaal Afyonkarahisar
Burhanettin Çoban, Duqa Magaalada Afyonkarahisar, wuxuu sheegay in Tareenada Xawaaraha Sare ay socon doonaan inta udhaxeysa Ankara iyo İzmir isla markaana ay sameyn doonaan duulimaadyo 8 maalin uun. “3 waxaa laga dhisi doonaa Saldhigga Tareenka ee Cali Çetinkaya halka midka kale ee 5 laga dhisi doono hoteelka Korel Hoteelka. [More ...]
Ku xigeenka CHP Kocaeli Ku xigeenka Akar ayaa qiimeeyey taraamka
Izmit Akçaray tram CHP Kocaeli ku xigeenka Haydar Akar tram waana in howsha noocaas ah inbadan la qabtaa, ayuu yidhi. Ku xigeenka CHP ee Kocaeli Haydar Akar ayaa bishii la soo dhaafay furay furitaanka tareenka [More ...]
TÜVASAŞ Waxsoosaarka Welded ee heer caalami ah
Turkey baabuur Industries Inc. (TÜVASAŞ), caalamku aqoonsan yahay iyo ECWRV (Guddiga Yurub ee Rail Baabuurta Codsiyada Source) jirka shahaado ansixiyey GSI SLV-TR Alxanka Technology Center kooxda xaqiiqo raadinta EN [More ...]